China ngwaahia Tungsten Carbide Rotary Burrs rụpụta na Factory | N & D Na-eme Ihe
Tungsten carbide ọtụtụ-eji na ulo oru ígwè, na-eyi na-eguzogide ọgwụ ngwá ọrụ na mgbochi corrosion.
Tungsten carbide burs bụ obere ngwa ọrụ eji egbutu, ịkụ ala, egweri, na imecha elu. Ha na-mere nke tungsten carbide, nke bụ oké ike na-arụ ọrụ na elu na-agba na-kpọmkwem ọnwụ n'ọnụ. A na-ejikarị ya arụ ọrụ CNC, ntanye eze na ihe eji eme ihe.
Tungsten carbide burs di okpukpu atọ karia nchara. N'ihi na Tungsten Carbide bụ ihe siri ike dị ka ọ nwere ike ijigide nkọ, na-eme ka ọ bụrụ ngwa ọrụ ịcha oke arụmọrụ. Carbide burs na-egbutu ma na-ewepu ihe ezé ezé karịa ịghacha dị ka mgbapu diamond, nke a na-eme ka ọ dịkwuo nro. A na-eji ya maka ike na ngwaọrụ ikuku.
Carbide burrs na ọtụtụ-eji maka metalwork, ngwá ọrụ Ndinam, injinịa, nlereanya injinịa, osisi pịrị apị, jewelery Ndinam, ịgbado ọkụ, chamferring, mgbatị, deburring, egweri, cylinder isi porting na sculpting. A na-ejikwa ya na mbara igwe, akụrụngwa, eze, nkume na ịkpụzi ọla, na ụlọ ọrụ ọkpụkpọ akpọrọ ole na ole.
* Na-egwe ihe
* Cha olulu
* Ọrụ ihu
* Na-arụ ọrụ na weld seams
Nke gara aga: Tungsten Carbide mkpọ
Osote: Tungsten Carbide Mkpara